ICardamom Suite - Indawo Yokuhlala Ezimeleyo - I-Airbnb
ICardamom Suite - Indawo Yokuhlala Ezimeleyo
UNoel ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uNoel iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
ICardamom Suite yindawo ekhethekileyo ye-2 BHK etofotofo netofotofo. Iifestile ezinkulu zenza kubekho ukukhanya kwemvelo okufudumeleyo kuze kubekho iindawo ezintle zesixeko. Le ndawo ikumgangatho ozimeleyo kwaye ikunika ubumfihlo obupheleleyo. Ikhitshi lisebenza ngokupheleleyo kwaye liza nesitovu segesi, i-microwave oven, iketile yombane, i-toaster, i- cutlery kunye ne-crockery. Sinendawo yokupaka ekhuselekileyo. Singakwazi nokulungiselela ukubukwa kweendawo ezilungiselelwe kakuhle size sithumele izinto ezintle xa kuza kuhlalwa ixesha elide
Amagumbi ethu okulala ayi-2, amagumbi okulala anezindlu zamaplanga akwindawo ephakathi eGangtok, kwisixeko esikhulu saseSikkim, igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle liyilwe kucingwa ngawe. Le ndawo ifudumele, itofotofo ibe ikwizinga eliphezulu. Izinto zeplanga zepine kunye nezinto zokuhombisa zasekuhlaleni zizisa iSikkim ekhethekileyo kule ndawo. Indawo kunye neefestile zayo ezinkulu zikunika umbono omhle wesixeko. Iyunithi isecaleni kweLemon Tree Hotel Gangtok kwaye ikufutshane kakhulu embindini wesixeko kunye neeteksi ezikufutshane. Le ndawo ixhotyiswe ngezi zinto :-
• Molo Isantya seWiFi - i-50 Mbps
• i-TV eyi-42 ”enentonga YOMLILO YE-AMAZON okanye isasaze ngqo kwisixhobo sakho ukuya kwiTV. (ungasebenzisa iakhawunti yethu ye-Netflix ukuba awunayo)
• Ikhitshi elisebenza ngokupheleleyo kunye neCutlery, iCrockery kunye neWensils. - Asinayo inkonzo yokupheka, unoku-oda nge-app yethu yokuhambisa ukutya ekuhlaleni ukuba ukhetha ukungapheki.
• Ukucocwa kwendlu, Izinto zangasese, Izinto zebhedi kunye neetawuli.(Ukucocwa kwendlu akuzukwazi ukufumaneka ngexesha lokuhlala ngenxa yezithintelo zeCovid) Izinto ezibalulekileyo zokuzihoya ngokwakho ziza kufumaneka.
• Ibhari Yezimuncumuncu Yokwamkela Simahla (iCornflakes, iiNoodles ezikhawulezileyo, iiBiscuits, Ikofu kunye neTi)
• Amanzi asebenzayo iiyure eziyi-24
Ii-geysers • Ifriji
• I-microwave •
• I-Kettle Water Heater
• Izixhobo zokufudumeza igumbi •
• Isixhobo sokomisa iinwele •
• Indawo Yokupaka Iimoto - Sinendawo ekhuselekileyo yokupaka imoto kwisakhiwo.
• Sinokulungiselela uhambo losuku lwasekuhlaleni size sidlulisele ukuya nokubuya kule ndlu ukuba ufuna njalo.
Ikude ngeekhilomitha eziyi-2,5 okanye imizuzu eyi-10 xa uhamba ngemoto
* I-SNT Bus Stand ikumgama weekhilomitha eziyi-2 okanye imizuzu eyi-10 ngemoto
* Irenki Yasekuhlaleni yeTaxi yimitha eziyi-200 okanye umgama wemizuzu eyi-4 xa uhamba ngeenyawo
* I-Tashi View Point ikumgama wemizuzu eyi-15 ngemoto
* I-Banjhagri Falls ikumgama weekhilomitha eziyi-5.5 okanye imizuzu eyi-15 ngemoto
* Isikhululo seenqwelo-moya iBagdogra kunye nesikhululo sikaloliwe i-NJP ikumgama weeyure eziyi-5 ngemoto /iikhilomitha eziyi-120
* Uninzi lweevenkile zokutyela ezidumileyo, iibhari kunye neekhefi zifumaneka okanye kufutshane ne-Marg
Iyunithi ikufutshane kakhulu embindini wedolophu.
Umntu Oncedisayo Uhlala kwiwebhsayithi ibe unokufowunelwa ukuze akuncede